Yibethe! | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 4, 2009 NgoMgqibelo, ngo-Epreli 16, 2016 Douglas Karr
UMicrosoft uthatha intloko kaGoogle ngegama eligama linye nophendlo kunye noGoogle = ukubaluleka. Nantsi Intengiso yokuqala eyenziwa nguMicrosoft.
Ndiyathemba ukuba iMicrosoft inokucela umngeni kuGoogle Bing. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ndiyisebenzise njengenjini yokukhangela engagqibekanga, kwaye ndifumana iziphumo ezifanelekileyo-lelo ligama lomdlalo.
Ukujonga kumzi mveliso wokuthengisa kwiinjini yokukhangela, uGoogle wenze umsebenzi ogqwesileyo wokuchaza ukuba yintoni uphando kodwa uguqula indlela yethu yokuziphatha kunye nokwamkelwa kwixesha elide. Sonke sigxile ngoku kwindibaniselwano yamagama aphambili- kwaye siyazama kwaye sizame kwakhona xa singafumani siphumo. Kwicala elingasemva, iinkampani zokwenza iinjinjini yokukhangela zibaleka ukuya kumdlalo nenkqubo ye-backlinking campaigns kunokuba iinkampani zabo zibhale nje umxholo onyanzelisayo. Ukubuyela umva kugqwetha ukubaluleka kuGoogle kwaye kwenza ukuba kube nzima kwezinye zezona ziphumo zibalaseleyo ukubekwa.
Kwelinye icala, ndiyaqonda ukuba amagama asetyenziswa ngabantu ukukhangela awafani namagama amashishini afanele ukuba awasebenzise ukuze afumaneke; Nangona kunjalo, ukukhangela kufuneka kulungelelanise kwaye koyise loo micimbi. Ukuba ndikhangela ugqirha wamazinyo omkhulu, kutheni ndingafakwanga kwiphepha leziphumo nooGqirha bamazinyo abandingqongileyo abaneziphumo ezilungileyo ezivela kwezinye iindawo ukuya kwinqanaba # 1?
Endaweni yoko, ndifumana kuphela iirejista, kunye noogqirha bamazinyo belizwe kuba basebenzise amagama aphambili kwizihloko zabo zephepha, umxholo kunye ne-backlinks. Ayisiyo mpendulo efanelekileyo. (I-Bing ayikhonkci, nokuba). Kuya kuba nzima kangakanani ukufaka isicelo se- Idilesi ye IP; vula kwaye udibanise iziphumo zokukhangela kunye nezasekhaya, nazo?
Lixesha lokuba ukhangelo lube nobukrelekrele, kwaye ndiyathemba ukuba ukhuphiswano phakathi Bing kwaye Uphando iphucula amava ophando ngokubanzi kwi-Intanethi.
tags: bingbing yorhwebomicrosoftukukhangela ngaphezulu
Lixesha lokuba Jika iNkampani yakho ijonge ezantsi
Bobuphi ubungakanani bePhepha leWebhu elifanelekileyo?
Juni 5, 2009 ngo-10: 40 PM
Ndiyabulela iintloko malunga ne-BING, bendingekayazi oko kude kube ngoku. Ndingenise iiwebhusayithi ezimbalwa, kwaye uyazibuza ukuba izakundizisela nasiphi na isithuthi esongezelelweyo. (Ndine-Google analytics kwiziza, andazi ukuba oko kuya kundixelela ukuba kukho nasiphi na isithuthi esivela kwi-BING.)
Okwesibini amagqabantshintshi malunga nokhuphiswano mhlawumbi ukunceda ukuphucula ubukrelekrele bokukhangela, ekubonakala ngathi busemva kakhulu emva kwezobuchwephesha.